Global Voices teny Malagasy » Venezoela: ireo mpampiasa Twitter, mpitoraka blaogy ary ireo mpikambana amina forum ao ambany mason’ny fitsaràna. · Global Voices teny Malagasy » Print
Venezoela: ireo mpampiasa Twitter, mpitoraka blaogy ary ireo mpikambana amina forum ao ambany mason'ny fitsaràna.
Voadika ny 29 Jona 2010 19:04 GMT 1	 · Mpanoratra Marianne Diaz Nandika miora
Sokajy: Amerika Latina, Venezoela, Fahalalahàna miteny, Lalàna, Teknolojia, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Ny tantara lavan'ireo fitsabahana amin'ireo banky any Venezuela [EN] , dia nitarika tsaho marobe tsy azo nosorohana momba ny hoe banky iza indray no hiharan'ny fitsabahana ato ho ato. Ny Banky Federaly, niharany ny herinandro lasa teo, dia banky faha-roa ambinifolo nitsabahan'ny Governemanta nanomboka ny volana Novambra 2009.
Herinandro lasa izay, ny Filoha lefitra venezoeliana, Elias Jaua, dia nanambara fa ny Filoha Hugo Chávez dia nanome baiko ny minisitry ny raharaha anatiny sy ny fitsarana hanao fanadihadihana lalina mba hamantarana izay niavian'ireo tsaho mikasika ny tsy fahamarinan-toerana'ny banky tsy miankina. Nilaza i Jaua fa ny famoronana tsaho dia “heloka hahazoana sazy famaizana fitazonana an-tranomaizina mandritra ny sivy ka hatramin'ny 11 taona” ary nampitandrina izy fa hosaziana ireo mpandray anjara amin'ireo “forums amin'ny aterineto lasa foiben'ny tetidratsy politika”. Mandritra izay, ny Minisitry ny raharaha anatiny sy ny fitsarana, Tarek El Aissami, dia niteny hoe “Efa an-dalam-pikarohana ireo tompon'andraikitra amin'ity fandrebirebena sain'olona sy fampihorohorona ity izahay.“
Toy izany koa, ny mpitarika ny Fikambanan'ny Banky any Venezoela, Juan Carlos Escotet, dia nanohana ilay fepetra, ary mampitandrina fa ireo tambajotra sosialy amin'ny aterineto “dia tsy tokony mihitsy hanapariaka tsaho na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana, izay raisina tahaka ny heloka raràn'ny Lalàna mifehy ny banky.” Nanampy i Escotet fa izay niandohan'ireo vaovao ireo, “na avy amin'ny inona na avy amin'inona, Twitter, hafatra an-tsoratra, na avy amin'ny media inona na media inona” dia raisina tahaka nahavita heloka bevava.
Toy izao no voalazan'ny lalàana mifehy ny banky voatanisa etsy ambony:
Art. 448. Na olombelona tsotra io na olona araka ny lalàna izay manaparitaka vaovao tsy marina na mampiasa fomba fitaka hafa mety hiteraka fikorontanana eo amin'ny fiasan'ny bankim-pirenena ka miantraika any amin'ny toekarena ara-ekonomikan'ny firenena, dia ho voasazy an-tranomaizina, mandritra ny 9 ka hatramin'ny 11 taona.
Na dia efa fantatra aza fa ny zo dia mitarika andraikitra, dia maro ireo mpampiasa no mampiseho ny tsy fiombonan'izy ireo hevitra amin'ilay fanambarana, indrindra noho ny vokany amin'ny fitondrantena amin'ny aterineto, ateraky ny tahotra. Tsy maintsy ampahatsiahivintsika fa ireo fandrahonana fahiny nataon'i[ES]  Chavez tamin'ireo mpitoraka blaogy izay mamoaka vaovao mikasika ny fivarotana antsokosoko ny vola dollar any Venezoela, dia nitarika ny fanakatonan-tena ho an'ireo blaogy malaza maro nitatitra izany tao amin'ny firenena. Na eo aza anefa izany, dia misendaotra noho ity fepetra ity ny tontolon'ny twitter venezoeliana:
Amin'izao fotoana izao dia ho saziana ny fanapariahana tsaho mikasika ireo banky ao amin'ny #Twitter. Ary aiza ny fanadihadihana mikasika ireo tsaho izay naparitak'i #Chávez? #Venezuela
Any Venezoala, na iza na iza milaza tsaho mikasika ireo banky, dia mety ho tafiditra an-tranomaizina haingana lavitra noho ireo mpamono olona sy ireo mpangalatra mitolo-batana . #insolituniverse
Raha izao hita izao, dia tsy ilay lalàna amin'ny maha-lalàna azy loatra no mandranitra ireo mpitoraka twitter sy mpitoraka blaogy, fa ny fisafidianana izay ho endri-pitondrantena ataon'ny Governemanta laza masaka fa hampiharina, ary izay midika fa tato ho ato, dia mbola ambony noho ny hanoanana , fahantrana  sy ny tsy fandriampahalemana  ny fitondrantenan'ny olona eo anivon'ny aterineto. Na dia eo aza izany, dia mety ho fotoana izao hampahatsiahivana fa maro ireo tranonkala, toy ny Noticiero Digital, no mametraka politika momba ny fanakanana ao amin'ny forum -n'izy ireo izay mpampiasa aterineto miresaka mikasika ireo tsaho momba ny banky [ES] .
Kanefa, tsy izao no fotoana voalohany nitrangana trangan-javatra tahaka izao. Tamin'ny taona lasa, tany Goatemala, dia nisy olona iray nosamborina noho izy nitarika “fisavoritahana momba ny hetra [ES] “, ary tany Seúl, mpitoraka blaogy iray hafa ihany koa no voatana an-tranomaizina noho ny fanaparitahana tsaho mikasika ny fitatanam-bola [ES] .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/06/29/6789/
 fitsabahana amin'ireo banky any Venezuela [EN]: http://www.robertamsterdam.com/venezuela/2009/12/ex_bcv_gov_maza_zavala_goes_on_record_bank_interventions.htm
 fandrahonana fahiny nataon'i[ES]: http://liberal-venezolano.net/2010/05/14/paranoia-ignorancia-chavez-arremete-contra-editores-dolar-paralelo
 tsy fandriampahalemana: http://development.thinkaboutit.eu/think3/post/where_do_you_want_me_to_shoot_you_interpersonal_violence_is_a_matter_of_hea
 fanakanana ao amin'ny forum -n'izy ireo izay mpampiasa aterineto miresaka mikasika ireo tsaho momba ny banky [ES]: http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=495620&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=dcb183a5b9d0a5b4cb36e5aa8e801fa5
 dia nisy olona iray nosamborina noho izy nitarika “fisavoritahana momba ny hetra [ES]: http://elwebeo.com.ar/usuario-de-twitter-a-la-carcel-por-incitar-al-panico-financiero/
 tany Seúl, mpitoraka blaogy iray hafa ihany koa no voatana an-tranomaizina noho ny fanaparitahana tsaho mikasika ny fitatanam-bola [ES]: http://www.20minutos.es/noticia/445464/1/